आखिर फ्लाइट स्टाफमा धेरैजसो महिला नै किन हुन्छन् ? « Mero LifeStyle
के तपाईले हवाइजहाजमा यात्रा गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने फिल्म वा ब्लगमा कसैले यात्रा गरेको देख्नुभएकै होला । यसमा तपाईले एउटा कुराको नोटिस गरेको हुनुपर्छ । यात्रुहरुको सहयोगको लागि राखिएका स्टाफमा महिलाको संख्या नै धेरै हुन्छ । यात्रुहरुको हरेक कुराहरुको ध्यान राख्नका लागि एयर होस्टेस राख्ने गरिन्छ । संसारभरका धेरै फ्लाइट अटेन्डेन्टको रुपमा पुरुष भन्दा महिलाहरु नै धेरै हुन्छन् । यो मात्रै होइन, विमान भित्र काम गर्ने क्रू मेम्बरमा पनि महिला नै धेरै हुन्छन् ।
फ्लाइट स्टाफमा महिलाहरुको सहभागिता किन बढी छ ? यो जान्ने चाहना अधिकांशलाई होला । तपाईलाई यसको कारण सुन्दरता भन्ने पनि लागेको होला । तर यस्तो भने केही पनि होइन । यो एउटा ठूलो साइकोलोजिकल फ्याक्ट छ कि,मानिसहरु पुरुषको तुलनामा महिलाको कुरा धेरै सुन्दछन् । त्यति मात्रै होइन, उनीहरुको कुरामा सहमति पनि जनाउँछन् । फ्लाइट्समा सेफ्टी गाइडलाइन्स र आवश्यक दिशा निर्देशको पालना गराउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले फ्लाइट्समा अधिकांश एयरहोस्टेस नै यी सबै कुराको घोषणा गर्दछन् ।
महिला धेरै हुनुको कारण एउटा यो पनि हो कि, उनीहरुको चरित्र पुरुषको भन्दा कोमल, उदार र विनम्र हुन्छ । यसले यात्रु र कम्पनीको सकारात्मक छवि बन्छ ।
एक विमानमा जति कम वजन हुन्छ, त्यति नै यसको इन्धन र पैसा बच्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाको तौल पुरुषको भन्दा कम हुन्छ । यो कम्पनीको लागि फाइदाको कुरा हो । त्यसैले फ्लाइटमा दुब्लो र कम वजनकी महिलाहरु नै धेरै देखिन्छन् ।
अर्को मान्यता यो पनि छ कि, पुरुषको तुलनामा महिलामा प्रवन्धनलाई सम्हाल्ने क्षमता धेरै हुन्छ । उनीहरु कुनै पनि कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छन् र पालना पनि गर्दछन् । त्यसैले पनि पुरुषको तुलनामा महिला धेरै हुन्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा